CHANGHENG TECHNOLODY lishishini eliphambili kwezobuchwephetsha eShanghai, laphumelela inkqubo yokuqinisekiswa komgangatho we-ISO / TS16949. Umzi-mveliso ugubungela indawo ye-8000 yeemitha zesikwere, kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-200, kwaye ingeniso yonyaka iphantse ibe zizigidi ezingama-400 zeRMB.
I-SHANGHAI CORBITION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, eyasekwa ngo-2020, egxile kwizixhobo nakwizinto ezikhutshwayo zezixhobo, yinkampani ezimeleyo yeshishini phantsi kwetekhnoloji ye-Changheng.
It has amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-30 imodeli eluncedo, kuquka amalungelo awodwa omenzi wechiza kwiimveliso zonyango
Kule minyaka idlulileyo, sele ebonelele ngaphezulu kwe-100 yezisombululo zenkqubo kuyilo lweemveliso, ukuvelisa kunye nezinye kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe.
Inkampani ineqela labathengi abaziwayo behlabathi abanjengo: ZYbio, Sansure Biotech, Daan-gene, Shanghai PHARMA njalo njalo
Ngonyaka we-2019, wasebenza nabasebenzi be-BGI ukunceda iMorocco ekulweni ne-COVID. Kwiminyaka yemizamo, inkampani iphumelele ukuthembela kunye nokudumisa abathengi.
Ngobuchwephesha bokuqonda isifo njengeyona nto iphambili, UKULUNGISELELA lishishini lobuchwephesha kwezonyango elinika uluhlu olupheleleyo lwezisombululo zokudibanisa isixhobo sokukhupha iasidi yenyukliya, isixhobo sobukhazikhazi sePCR, umtshini ophathwayo, izixhobo zokuqonda isifo, izinto ezisetyenziswayo zebhayoloji.
Iimveliso zonyango zenziwe, zavavanywa kwaye zahlanganiswa kwiindibano zocweyo ezicocekileyo, ezingenaluthuli.
Inkampani ikwi-Dongjing Industrial Park, eyona ndawo iphambili ye-G60 Kechuang Corridor, iSithili seSongjiang, eShanghai, kufutshane nesikhululo seDongjing seMetro Line 9.
Izixhobo zonyango ziye zadlula kwizatifikethi zovavanyo lokhuseleko lwamazwe aphesheya / lwasekhaya kunye nokuqinisekiswa kwe-CE, i-liscense ye-prodcution ibeke kwi-reacord yoLawulo lokutya kunye noLawulo lweziyobisi. Inkampani ikwapasile inkqubo yolawulo lomgangatho wezonyango ye-ISO13845.
Iinjongo zabantu, ezenzululwazi kunye nezobuchwepheshe.
Khathalela impilo, uphuhliso oluzinzileyo.